`Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> Somaliga Water Plumbing Release Form - City of Minneapolis
Ogolaanshaha Ka shaqaynta Nimaamka Biyaha
Mararka Qaarkood Magaalada Minneapolis waxay u baahankartaa iney dayactir ku samayso Mitirka Biyaha ee Guryaha, si loo xaqiijiyo in ay si sax ah u shaqaynayaan, si dayactirkaas loo sameeyo, ayaa loo baahanayaa in lasoo saaro Mitirka. Mitirka waxaa iska leh Magaalada Minneapolis, laakin Bayb ka uu ku xiranyahay waxaa iska leh Mulkiilaha Guriga.” “Marka lasoo saarayo Mitirka ama la badalayo waxaa suuro gal ah in uu shaqayn waayo Baybka uu Mitir ku xiranyahay. Sida uu qabo sharciga Magaalada Minneapolis ee number kiisu yahay Minneapolis City Ordinance 509.340, Mulkiilaha guriga ayaa masuul ka ah, inuu xaqiijiyo in Baybka uu ku xiranyahay Mitir ku uu si wanaagsan u shaqaynayo.”
Hadaba, si loo badalo Mitir ka, waxaa loo baahanyahay saxiix cadaynaya in Magaalada Minneapolis aaney masuul ka ahayn lacala hadii Baybku uu duleeshamo.
Macaamiishu waxay dooran karaan iney shaqaalaystaan Xirfadlayaal Laynsan haysta si ay ugu badalaan Mitirka Biyaha ee Magaalada Minneapolis ay leedahay, iyagoo wacaya lamberka 612-661-4951.
Waxaan Ogolaadey in Saxiixaygaan electronic ga ah ee hoos ku qoran loo isticmaali karo fulinta hawshaan electronic ga ah.
Magaca Loo adeegaha: (Magacaaga oo buuxa ku Qor halkaan hoose si loogu isticmaalo Saxiixaaga.)*
Waxaan halkaan ku cadeeynayaa in Magaalada Minneapolis Laanteeda Biyaha aaney masuul ka ahayn waxii dilaac, ama duleeshan ah ee kadhasha xiliga labadalayo Mitirka biyaha ee kuyimaada Baybka ama qalabka ku xiran.
Ciwaanka, ama Address ka Goobta *
Number ka Akoonka*
Magaca Loo Adeegaha*
Taariikhda (M/B/S)* M: waa Maalinta oo kakooban 2 Xaraf; B: Bisha oo kakooban 2 Xaraf, S: sanadka oo ka kooban 4 Xaraf. Tusaale: 17/08/2015 ama 01/01/2015
Saxiixa Loo adeegaha: (Magacaaga oo buuxa hoos ku qor si loogu isticmaalo saxiixaaga.)*